Inkampani yethu - Wavelength Opto-Electronic
Iminyaka engama-20 yesipiliyoni sezithombe
I-Ronar-Smith® Laser Optics
I-Infra® IR Optics
Ama-Lasers & Detectors
Wavelength Opto-Electronic (S) Pte Ltd iqinisekiswe i-ISO 9001 kusukela ngo-2004, nebhizinisi lethu eliyinhloko ekwakhiweni kwe-optics nokukhiqiza i-laser optics, amamojula optical, ukwenza ngokwezifiso uhlelo oluyinkimbinkimbi kanye ne-LVHM prototyping esheshayo.
Senza amakhanda emishini ye-laser yezimboni emakethe yamazwe omhlaba yokufaka isicelo se-laser. Siphinde futhi sibambisane ocwaningweni olubanzi nasekuthuthukisweni, ekwakheni amasistimu okubona angokwezifiso asezingeni elincane ukuya kwelikhulu futhi sinikeze izixazululo ze-QA/QC ze-metrology kumakhasimende emakethe yamazwe ngamazwe naseSingapore.
Amanani ethu Abalulekile - ITEC:
I-Optics bekuyimikhiqizo yethu yendabuko eqinile kusukela ekusungulweni kwayo. Siyakwazi ukuhlinzeka nge-laser optics yekhwalithi ephezulu, imikhiqizo ye-infrared optical kanye nohlu olugcwele lwezinsizakalo emkhakheni wobuchwepheshe be-optical. Ngemishini yethu ethuthukisiwe nemishini yokukhiqiza, yokuhlola & yokulinganisa kanye nokulawula ikhwalithi, kanye nolwazi oluningi kanye nobuchwepheshe bolwazi lwethu lwe-optical, siyakwazi ukunikeza ukusekelwa okuhle kukhasimende elidinga ukwenza ngendlela oyifisayo okokubona kanye namalensi. Sifaka uhla lwamagama olukhulu kakhulu lwezingxenye ezijwayelekile zangaphandle kweshelufu, okuhlanganisa ukukhethwa okubanzi kwamalensi okubona, izihlungi ezibonakalayo, izibuko ezibonakalayo, amawindi, amaprism, ama-beamsplitters, noma ama-diffraction grating. Siphinde sakha amakhanda enqubo ye-laser anezibuko ezikhanyayo, amalensi agxilile, umlomo wombhobho, indiza yegesi/yamanzi adume kakhulu ngezihlanganisi zesistimu ye-laser. Singaletha amakhanda ethu okubona kanye nenqubo ye-laser kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba ngesaziso esifushane.
Njengoba sakha isisekelo samakhasimende ngokuthengisa izingxenye zethu zamehlo, izinhloko zezinqubo ze-laser kanye nemikhiqizo ehlobene ne-laser nezithombe ezimele, kanye nekhono lethu le-hardware yasendlini, isofthiwe nekhono lokuklama okubonakalayo, lezi zici zisiholela ekunikezeni izixazululo ezididiyelwe esikhundleni semikhiqizo evamile ehlukahlukene. Ngezibonelelo Zikahulumeni Zase-Singapore okuwukusekela amabhizinisi amancane aphakathi nendawo, siyakwazi ukuqinisa izinsiza zethu futhi sithathe amaphrojekthi amaningi ukuze sisize amakhasimende axazulule izinkinga zawo zokusebenza futhi andise umkhiqizo wawo. Eminyakeni embalwa edlule, sibambe iqhaza ngempumelelo ekuthuthukiseni ama-laser doppler vibrometers, i-compact digital holoscopes, i-laser calorimetry system, ikhanda lenqubo ye-laser robotic, inqubo ye-laser yokuqapha uhlelo lwe-MWIR, uhlelo lwe-IR ellipsometer, njll. Ngokuhlangenwe nakho kwethu okukhulu kwezokuthengisa nokumaketha kanye inethiwekhi yokusabalalisa ebanzi, siphinde futhi sithengise imikhiqizo yethu evela kumaphrojekthi
Ngemuva kokuthi siqokwe njengabasabalalisi abagunyaziwe nezikhungo zokuqeqesha kwamanye amazwe ase-Asia izinkampani ezimbalwa ezaziwayo emhlabeni jikelele ze-Optics & Photonics Design Software, siphinde sakha iyunithi yebhizinisi le-Distribution ngokusebenzisana nezinkampani eziningi ezihamba phambili enkundleni ye-laser & Photonics. . Sabe sesimisa ukusebenza okuqondile eThailand, eTaiwan naseKorea. Sizoqhubeka nokusetha amahhovisi okuthengisa engeziwe e-Asia nase-US. Siphinde sisebenze nabasabalalisi bemikhiqizo bendawo be-Laser & Photonics abahamba phambili ukuze simakethe imikhiqizo yethu ezimakethe zase-Europe nase-Japan.
Asifuni ukuba omunye nje umdayisi wamakhasimende ethu, singathanda ukuba ozakwethu bebhizinisi lekhasimende lethu. Kungempumelelo yabo ezosenza siphumelele futhi sikhule ngamandla.
Siqikelela kakhulu ukulalela izidingo zamakhasimende ethu futhi uma izidingo zawo kungeyona into esiyithuthukisile, sizobheka ukuthi sinalo yini ikhono lokuwathuthukisa.
Sakha imikhiqizo sinamakhasimende engqondweni.
Sizophatha amakhasimende ethu ngendlela esifisa ukuphathwa ngayo futhi siqinisekise ukuthi konke ukusebenzelana kwenziwa ngendlela ejabulisayo nesezingeni eliphezulu.
Inhloso yethu yebhizinisi ukuqeda izinkinga zamakhasimende ngezixazululo zethu ukuze kwandiswe umkhiqizo wabo.
I-SME100 Izinkampani Ezihamba Ngokushesha e-Singapore 2015
Imiklomelo ye-Singapore Brands 2016
I-Singapore Institute of Manufacturing Technology Award Valued Partner Award 2017
I-Singapore-Germany Academic-Industry International Collaboration Award 2018
© 2022 - Wavelength Opto-Electronic - Inkampani eqinisekisiwe ye-ISO 9001
I-Laser Optics • I-IR Optics • Ukufanekisa i-Optics • Ama-Optics abunjiwe • Ama-Lasers & Detectors • Amasistimu Nesofthiwe
Sesha Imikhiqizo Ngezicelo
Ukuskena kwe-3D Dynamic & Ukuphrinta
I-AR / VR
Ukuhlolwa Kokudla Nokupakishwa
I-LiDAR Yezimoto Ezizihambelayo
Ukuhlolwa Kwezinga Lokushisa Okuningi
Ukwelashwa Nge-Laser Yezokwelapha
I-Medical Optical imaging
Amanothi wohlelo lokusebenza
Bhalisela incwadi yethu yezindaba:
* libonisa edingekayo
Isigaba somkhiqizo *
Ama-Lasers & Detectors / Systems & Software
I-Optical Calculator manje ivuliwe:
Xhumana nathi ku:
Le webhusayithi ibukwa kangcono nge-Chrome/Firefox/Safari.
Siyaphuma ngomhlaka-29 Jan - 6 Feb kodwa iwebhusayithi yethu isebenza 24/7.
Sithumelele uphenyo futhi sizophendula uma sesibuyile 😎.